I-Akkara Homestay, isithabathaba somfula esineminyaka engama-200
Ikamelo e-i-bed and breakfast ibungazwe ngu-HostSphere
Itholakala osebeni lomfula i-Meenachill e-Kottayam-Kerala, amahora amabili nje kuphela phansi komgwaqo usuka e-Kochi kukhona i-Akkara - Ikhaya Ngaphesheya Komfula. Lesi sithabathaba esineminyaka engu-200 ubudala sinamagumbi anephansi le-terracotta kanye negceke elikhulu elivulekile eliholela emfuleni.
Ungachitha ubusuku nababungazi bakho esiphuzweni, uthathe isampula yokudla kwangempela kobuKristu baseSyria, uhlole isikhungo sethu se-Ayurveda esihlinzeka ngemithi yokwelapha yokuvuselela umzimba noma umane uphumule ngeseshini yomuntu siqu ye-Yoga khona lapha endaweni.
Lesi sithabathaba esineminyaka engu-200 ubudala sinamagumbi anephansi le-terracotta kanye negceke elikhulu elivulekile eliholela emfuleni. Izivakashi zingaya kodoba, zihlale esikebheni, zijikeleze ezindaweni ezihlanzekile zase-Kottayam futhi zijabulele ukudla kwase-Syria Christian. Leli khaya linamakamelo ayisithupha e-AC negumbi elilodwa elingelona i-AC elinezakhiwo zenkathi nefenisha nokugeza okunamathiselwe. Igumbi ngalinye kulesi sakhiwo esikhulu linethala elinemibono emihle yezindawo ezingemuva ezihlanzekile.
I-Kottayam yidolobha lezincwadi namasonto nemigudu yamanzi namasimu. Idolobha likaMasipala lokuqala elikwazi ukufunda nokubhala ngo-100% e-India futhi lishicilela amaphephandaba nomagazini abambalwa ngesi-Malayalam nesiNgisi.
Kuyinqaba yomphakathi wamaKrestu waseSyria, enamabandla angaphezu kwama-200. Enye yazo - 'Ngokwenyama' - ineminyaka engaphezu kwama-300 futhi iyisibonelo esihle sezakhiwo zenkathi.
I-Kottayam itholakala ezansi kwe-Western Ghats futhi iseduze namasimu amaningana futhi isiphenduke isikhungo sokuhweba sezitshalo zokutshala: irabha, itiye, upelepele kanye nekhadiamom.
Indawo: Kottayam District
Yasungulwa: Julayi 1, 1949 njengesifunda
Indawo: Izintaba ze-Western Ghats kanye nechibi laseVembanad entshonalanga
Indawo: 2208 sq.km noma u-5.68% wesisindo somhlaba wombuso
Inani labantu: 19,52,901 lakh abantu kulesi sifunda
Izinga Lokushisa: Ihlobo 27 deg. - 35 degrees centigrade
Ubusika 25 deg. - 30 degrees centigrade
Isikhathi esiphakanyisiwe sohambo: Agasti kuya kuFebruwari nangoMeyi kuya kuJulayi kumaMonsoon.
Ukufunda nokubhala: 100% ukufunda nokubhala
Umsingathi kanye nomphathi bahlale bekhona ukuze banakekele izidingo zakho noma bavele baxoxe .